उपसचिव सञ्जेलमाथि कार्यकक्षमै यी दुइ कारणले भयो हा’त’पा’त ! – Sudarshan Khabar
उपसचिव सञ्जेलमाथि कार्यकक्षमै यी दुइ कारणले भयो हा’त’पा’त !
उपसचिव प्रेम सञ्जेलमाथि कार्यकक्षमै हा’त’पा’त भएको घटना अहिले चर्चामा छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सञ्जेलमाथि शनिबार आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीले हा’त’पा’त गरेका थिए।
विराटनगर घर भएका ५७ वर्षका सञ्जेल २०३८ सालदेखि सरकारी सेवामा छन्। उनी जहाँ जान्छन् त्यो कार्यालयमा ‘हामी घुस खाँदैनौं, तपाईं घुस दिन आउनुभएको भए उल्टो का’र’बा’ही’मा पर्नुहोला। हजुर सावधान!’ भन्ने पोस्टर टाँस्छन्।
धेरैले उनलाई भ्रष्टचारविरोधी कर्मचारी भनेर चिन्छन्। सञ्जेलमाथि शनिबार बिहान ११ बजेतिर कार्यकक्षमै करारमा रहेका कर्मचारीले हा’त’पा’त गरेको खबर आयो। घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेकी कार्यालय सहयोगी नेत्र भट्टराई निरौला र मेनुका सापकोटा कोइरालालाई प्र’ह’री’ले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान जारी राखेको छ।
आफूलाई ती कर्मचारीले पञ्चिङ मेसिन, नेल कटर, कागजको डल्लोलगायतले प्र’हा’र गरेको सञ्जेल बताएका छन्। सञ्जेलमाथि हा’त’पा’त हुनुमा मुख्य दुई कारण देखिएका छन्।
सञ्जेलले गत शुक्रबार करारमा रहेका नासु, कम्प्युटर अपरेटर विराटनगर ३ का निर्मलकुमार दाहाललाई कामबाट निकालिदिएका थिए।
सञ्जेलमाथि हा’त’पा’त गरेकाे आ’रो’प लागेकी नेत्र भट्टराई निरौला र दाहालबीच पारिवारिक नाता छ।
उनीहरूको आ’क्र’म’ण’बाट सञ्जेलको हातको पाखुरा, बुढी औंला र गालामा चोट लागेको छ।
सञ्जेलले निर्मलकुमार लगायतलाई कार्यालयको पानी तान्ने मोटर चोरी भएको भन्दै स्पष्टिकरण सोधेका थिए। उक्त स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि उनलाई जागिरबाट निकालिएको थियो।
‘शनिबारका दिन मलाई कार्यालयमा बोलाएर महिला कर्मचारीले झ’ट्टी हानेका हुन्,’ घटनापछि पत्रकारहरूसँग सञ्जेलले भनेका छन्। ती कर्मचारी शनिबार बिहान १० बजे कार्यालय आएका थिए।
उनीहरूले फोन गरेर बोलाएपछि आफू कार्यालय आएको सञ्जेलको भनाइ छ।
सञ्जेलमाथि हा’त’पा’तको आ’रो’प लागेका दुई जना महिला कर्मचारीलाई प्र’ह’रीले शनिबार नै नियन्त्रणमा लिएको छ।
जिल्ला प्र’ह’री कार्यालय मोरङका प्र’ह’री नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताए।
‘उहाँहरू अनुसन्धानमै हुनुहुन्छ। हिरासतमा राखेर घटनाबारे अनुसन्धान जारी छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयमै सञ्जेलमाथि कु’ट’पि’ट गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।’ कार्यालयसम्बन्धी विवाद, रिसइवी, मनमुटावले गर्दा सञ्जेलमाथि हा’त’पा’त भएको खुलेको उनले जानकारी दिए।
‘रिसइबी, मनमुटाव, भनाभन र हा’त’पा’त भएको भन्ने खुलेको छ,’ उनले भने। महिला कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई कामको प्रेसर दिने गरेको, तुच्छ बोलेकोलगायत आ’रो’प सञ्जेलमाथि लगाएका छन्।